मादलको व्यापार घट्दो | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ७ कार्तिक २०७६, बिहीबार १६:३८
सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा तिहार आउनै लाग्दा मादल खरीद बिक्री शुरु भएको छ । गीत सङ्गीतमा ताल बाजाको रुपमा मादल बढी नै प्रयोग गरिन्छ । चाडपर्वलाई लक्षित गरी सदरमुकाम खाँदबारीलगायत जिल्लाका अन्य मुख्य बजारमा समेत मादल बिक्री गर्न थालिएको छ ।
तिहारमा देउँसी, भैँलो खेल्दा मादल प्रयोग हुने भएकाले तिहार लक्षित मादल बिक्री शुरु भए पनि व्यापार भने घट्दो छ । एउटा मादलको मूल्य दुई हजारदेखि १२ हजारसम्म पर्ने गरेको छ । सानो र ठूलो मादलको मूल्य फरक फरक पर्दछ । मादल व्यवसाय गर्दै आउनुभएका भोजपुर केउरेनीपानी–१ का टेकबहादुर बिसुंखेले मादलबाट वार्षिक रु एक लाख ५० हजार आम्दानी हुने गरेको भए पनि पछिल्लो वर्षहरुमा व्यवसायमा निराशा आएको बताउनुभयो ।
केही वर्षअघिसम्म ठूला चाडपर्व, स्थानीय मेलापर्वमा मादल बजाएर नाचगान गर्ने चलन थियो । तिहारमा गाउँका टोलटोलमा मादल बजाएर देउँसी, भैलो खेल्नेहरुको थुप्रै समूह पाइन्थ्यो । आधुनिकतासँगै विद्युतीय बाजाको प्रयोग बढ्न थालेपछि मादलको महत्व कम हुँदै गएको हो । डिजिटल गीत सङ्गीतको कारण मादल नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि यो व्यवसायमा लागेकाहरुलाई भने झनै समस्या पर्दै गएको दिङ्लाका मादल व्यवसायी रमेश धुलोकोटीले बताउनुभयो ।
पहिलेपहिले जोर मादल बजाएर आँगनमा देउसी खेलिन्थ्यो तर अहिले क्यासेट बजाएर सिकुवामा देउसी खेल्ने चलनले मादल लोप भएको धुलोकोटीको भनाइ छ । विद्युतीय बाजा सस्तोमा पाइने भएकाले मादल बिक्री वितरण कम हुँदै गएको छ । विद्युतीय बाजाको प्रयोगका कारण मादल बनाउने पेशा अङ्गालेका व्यक्तिहरुको व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।
गोरखाको बारपाकमा अबरुद्ध विद्युत सुचारु भएको छ । एक महिना पछि बिजुली बलेको स्थानीय बिरबहादुर
५५ हजार छ सय ९६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको गोरखामा ४६ हजार दुई सय २०
गोरखा नगरपालिकाले नगरक्षेत्र भित्रको खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्ने उद्देश्यले किसानलाई बिउमा अनुदान दिने निर्णय गरेको